Ngosuku Lwesithathu, Amazwi KaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, Negunya LikaNkulunkulu Lenza Umhlaba Uchichime Ngokuphila | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-05-13 06:13:05 107
Asiqhubekele emshweni wokugcina walesi siqephu: “UNkulunkulu wabe esethi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo.” Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma zonke lezi zinto zenzeka zabakhona kulandela imicabango kaNkulunkulu, ngokuphazima kweso, izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezincanyana zaqala ngokuntengantenga ukuveza amakhanjana azo enhlabathini, futhi nangaphambi kokuthi zizithintithe izinhlayiya zenhlabathi emizimbeni yazo, zase zivayizelana ngentokozo zibingelelana, zinqekuza, zimamathekela umhlaba. Zabonga uMdali ngokuphila ayeziphe kona, zamemezela emhlabeni ukuthi zaziyingxenye yezinto zonke, nokuthi zaziyonikela izimpilo zazo ukubonakalisa igunya loMdali. Lapho amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, izwe laklabusa futhi laba luhlaza, yonke inhlobo yemifino eyayingathandwa umuntu yaqhibuka yavela enhlabathini, kanti izintaba namathafa kwagcwala kwachichima izihlahla namahlathi… Lo mhlaba owawungatheli lutho, lapho okwakukade kungekho ngisho okuncane okukhomba impilo, wembozwa ngokushesha ngobuningi botshani, izithombo kanye nezihlahla futhi wachichima izinto eziluhlazana…. Amakha otshani nephunga elimnandi lenhlabathi kwasabalala emoyeni, nezinhlobonhlobo zezitshalo zaphefumula zihambisana nokuzungeza komoya, futhi kwaqala inqubo yokukhula. Khona manjalo, ngenxa yamazwi kaNkulunkulu futhi kulandela imicabango kaNkulunkulu, zonke izihlahla zaqala imijikelezo yokuphila engapheli lapho zikhula khona, ziqhakaze, zithele izithelo futhi zande. Zaqala zalandela ngokungaphazami izinkambo zazo zempilo, futhi zaqala zabamba iqhaza lazo phakathi kwazo zonke izinto…. Zonke zazalwa, futhi zaphila, ngenxa yamazwi oMdali. Zazizothola ukuhlinzekwa nokondliwa okungapheli nguMdali, futhi zisimame ziphile noma kunzima emagumbini wonke ezwe ukuze zikhombise igunya namandla oMdali, futhi zazizokhombisa amandla okuphila ezaphiwa wona uMdali …
Impilo yoMdali iyamangalisa, imicabango Yakhe iyamangalisa, kanti negunya Lakhe liyamangalisa, ngakho, kwathi lapho amazwi Akhe ephimiswa, umphumela ekugcineni kwaba ukuthi, “futhi kwaba njalo.” Ngokusobala, uNkulunkulu akadingi ukusebenza ngezandla Zakhe uma enza; umane asebenzise imicabango Yakhe ukuyala, kanye namazwi Akhe ukuyala, futhi ngale ndlela izinto ziyenzeka. Ngalolu suku, uNkulunkulu waqoqela amanzi ndawonye endaweni eyodwa, wenza umhlaba owomile ukuthi uvele, emuva kwalokho wabe esedala ukuthi utshani buhlume emhlabeni, kwase kukhula imifino ethela imbewu, nemithi ethela izithelo, futhi uNkulunkulu wayihlela ngayinye ngohlobo lwayo, futhi wadala ukuthi ngayinye iqukathebe imbewu yayo. Konke lokho kwenzeka ngemicabango kaNkulunkulu nemiyalo yamazwi kaNkulunkulu, futhi ngakunye kwavela, okunye emuva kokunye, kulo mhlaba omusha.
Okwedlule： Ngosuku Lwesibili, Igunya likaNkulunkulu Lihlela Amanzi, Futhi Lenza Utwa, Bese Kuvela Indawo Yokuphila Kwabantu Okuyisisekelo Kakhulu
Okulandelayo： Ngosuku Lwesine, Izinkathi, Izinsuku, Kanye Neminyaka Yesintu Iyavela Lapho UNkulunkulu Esebenzisa Igunya Lakhe Futhi
UMdali wasebenzisa amazwi Akhe ukufeza uhlelo Lwakhe, futhi ngale ndlela wedlulisa izinsuku ezintathu zohlelo Lwakhe. Kulezi zinsuku ezintathu, uNkulu…
(UGenesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa u…